RCB IPL 2021 ရွေးချယ်မှု - အသင်း၏အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်သည်
နေအိမ် IPL 2021 ဆောင်းပါးများ
IPL အဖွဲ့၏ထူးခြားသောကစားသမားတစ် ဦး
လာမည့် ၂၀၂၁ အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ် (IPL) အတွက်ပြင်ဆင်မှုများကိုလာမည့် IPL သဘောတူညီချက်ရှစ်ခုလုံးမှစတင်ပြီးဖြစ်သည်။ XI ကိုမည်သည့်ပြိုင်ပွဲတွင်ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်နှင့်သူတို့၏ကစားသမားများတပ်ဆင်ထားသောအဆိုတော်များနှင့်မည်သို့ရှေ့ဆက်ရမည်ကိုကြည့်ကြစို့။
IPL ကန်ထရိုက်တော်ဝင် Challengers Bangalore (RCB) မှရွေးချယ်သည်
ပါ ၀ င်သောအသင်းများသည် T20 Gala ၁၄ ခုမြောက်ဗားရှင်းအတွက်အသုံးပြုသောသူတို့၏နောက်ဆုံးအသင်းအားလုံးနှင့်အတူလာသည်။ သူတို့ကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်နောက်တစ်နည်းအားဖြင့် BCCI ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့မှ Chennai တွင်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်၌ပြုလုပ်ခဲ့သော IPL ရောင်းချမှုလေ့လာမှုတွင်သင်တက်ရောက်မည့်သူများကိုထပ်မံရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အကြီးမြတ်ဆုံးကစားသမားများကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကစားသမားထဲသို့ထည့်သွင်းရန်အသင်းတစ်ဖွဲ့စီ၌ထိုက်တန်သောကစားသမားအချို့ရှိသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်ပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ၂၀၂၁ ရာသီတစ်လျှောက်လုံးအလုပ်ခွင်အပူကိုနွေးရန်လိုအပ်သည်။
KS Bharat ဟုလူသိများသော Kona Srikar Bharat သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ် (IPL) ၏ ၀ င်ငွေရူပီး ၂၀ သန်း၏အခြေခံကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သော Royal Challengers Bangalore (RCB) မှရွေးချယ်ခဲ့ပြီးနောက်သူသည်ထိပ်ဆုံးမှပါဝင်ခဲ့သည်။ Bharat သည်ယခင်ကသူတို့၏အသင်းတစ်လျှောက်လုံးဒေလီ Daredevils (ယခုဒေလီမြို့တော်) ကရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော်လည်း T20 Gala မှတစ်ဆင့်သူ၏နိုင်ငံတကာပွဲ ဦး ထွက်တွင်ထပ်မံပါဝင်နိုင် ဦး မည်မဟုတ်ချေ။
The Meantime တွင်ဂိုးသမားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည်ယခုနှစ်တွင်သူ၏ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ ဦး ထွက်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဘန်ဂလိုလိပ်စာတွင် AB De Villiers ၏ပုံသဏ္intoာန်ဖြင့်ထူးခြားသည့်ဂိုးသမားသရုပ်ဆောင်နှစ် ဦး နှင့်တပ်ဆင်ထားသည့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သွယ်လျဟန်ရှိသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ Josh Philippe အဖြစ်။ AB ၏ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်ခန့်မှန်းရသည့်အပြင်ဖိလစ်ပ်သည်သူ၏မရှိခြင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပဝါများကို ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်အချိန်တွင်ပင် RCB နှင့် ပတ်သက်၍ ဂိုးသမားကိုရွေးချယ်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။
KS Bharat သည်ကာလတစ်ခုလုံးအတွက် workbench ကိုနွေးရန်လိုအပ်နိုင်သည် IPL 2021သူသည်ကွန်ရက်များမှတဆင့်ပစ္စည်းများစွာကိုလေ့လာသင်ယူပြီးနောက်အခွင့်အလမ်းရရှိလိမ့်မည်၊ ထို့နောက်သင်၏ဂိမ်းကစားခြင်းတွင် Virat Kohli၊ Glenn Maxwell နှင့် AB de Villiers စသည့်ကစားသမားများကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ။ တမီးလ်နာဒူး၏အထူးထုတ်ကုန် ၀ န်ကြီးချုပ်ကလပ်သို့ R Sai Kishore သည်ပြည်တွင်းခရီးစဉ်အတွင်းသူ၏ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရှေ့စာမျက်နှာတွင်အချိန်အတော်အတန်ရရှိခဲ့သည်။ ဘယ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဂိုဏ်းလက်ဝဲ - armrest Turner တစ်လျှောက်လုံး Chennai Super Kings (CSK) ကရွေးချယ်ခဲ့သည် IPL ရောင်းချခြင်း 2020 အစား INR သန်း 20 ရူပီး။
အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိဘဲကောင်းကောင်းကစားခဲ့သည့် IPL ကစားသမားများ
Sunrise Hyderabad ၏ SWOT ဆန်းစစ်ခြင်း 16.03.2021
IPL 2021 အတွက်ပြိုင်ပွဲပုံစံကဘာလဲ။ 30.03.2021
Parimatch - ၁၂၀၀၀ အထိ 000 အပိုဆုကြေး!
© 2022 IPL2021 · · အိန္ဒိယပရီးမီးယားလိဂ် 2021
Parimatch အတွက်မှတ်ပုံတင်ပါနှင့်သင့်အသင်းများကိုကြည့်ပါ အခမဲ့တိုက်ရိုက်လွှ!
Myanmar English	 Hindi	 Persian	 Urdu	 Nepali	 Bengali	 Tamil	 Thai